महिलाहरुको प्राइभेसी अनावश्यक भाइरल बनाउदाको असर महिलाले भोग्नुपरेको छ - Naya Online
आइतवार, चैत्र ९, २०७६ (March 22nd, 2020 at 6:39pm ) अन्तर्वार्ता, ग्लामर न्युज, फिचर मोडेल, मनोरञ्जन, मोडेल वाच
मिस मंगोल–२०१२ सपना रोका मिडिया क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । ‘मिस मंगोल’ टाइटलले मात्र उनको पुरा परिचय खुल्दैन । व्यावसायिक रुपमै स्टेज कार्यक्रम होस्ट गर्दै आएकी सपना समाज सेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । इमेज एफएमकी प्रस्तोता समेत रहेकी सपना कार्यक्रमकै शिलशिलामा हङ्कङ, मलेसिया लगायतका देशहरुमा पुगिसकेकी छिन् । बुबा मनबहादुर रोका र आमा थामी रोकाबाट भिमगिठे बाग्लुङमा जन्मिएकी सपना अभिनयमा पनि अब्बल छिन् । उनले करिब १५ वटा जति म्युजिक भिडियो र २ वटा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । उनिसित नयाँ अनलाइनकी समीक्षा लिम्बुले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
हाल कतातिर ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
म अहिले इमेज एफएममा काम आरजेको रुपमा काम गरिरहेको छु । स्टेज कार्यक्रमहरुमा पनि काम गरिरहेको छु ।
७ वर्ष अघिको त्यो मिस नेपाल प्रतियोगितालाई सम्झिनुपर्दा ?
पक्कैपनि स्ट्रगल फेज थियो । गाउँबाट आएको १/२ वर्षमात्रै हुँदै थियो । केहि न केहि टाइटल प्राप्त गर्ने मेरो सपना थियो । त्यहि समय मिस मंगोल नेपाल हुने कुरा थाहा पाएँ । प्रतिस्पर्धा निकै थियो, त्यो क्षण म अझैँ सम्झिन्छु । जब टाइटल जितेँ, नामको पछाडि मिस मंगोल जोडिदा साह्रै खुशी लागेको थियो, त्यो अझैँ सम्झन्छु ।
कुन प्रश्नको उत्तरले तपाइलाई विजेता बनाएको थियो ?
नेपाली उत्तर दिनेहरुमा म पनि एउटा थिएँ । हामी १/२ जना मात्र नेपालीमा उत्तर दिनेमा थियौं । अझ टप टेनमा त ममात्र थिएँ । टपटेनको प्रश्न ‘तिमी व्यवहारिक जीवन राज्छौ कि स्वतन्त्रता रोज्छौ ? भन्ने थियो । टप ५ मा चाहिँ ‘तिमी सफल महिला बन्न चाहान्छौ कि असल महिला बन्न चाहान्छौ , किन ?’ भन्ने प्रश्न थियो । मैले सफल बन्न त मान्छेले सटकट बाटो अपनाएर पनि बन्न सक्ला , सफल त संसारमा जो कोहि बन्न सक्ला तर असल मान्छे कम हुन्छन् । त्यसैले म असल मान्छे बन्छु असल बने सफल भइन्छ भन्ने मेरो जवाफ थियो ।
ब्युटी पेजेन्ट प्रतियोगिताको विजेता बनेपछि सामाजिक कार्यमा लागेको देखिन्छ, तपाइले केके कार्य गर्नुभयो ?
ब्युटी पेजेन्ट प्रतियोगितामा भाग लिनेबेलामा म समाजसेवी हुन्छु भन्ने सोच सबैले राख्छ र मैले पनि राखेको थिएँ । टाइटल जितिसकेपछि मैले ती भूमिकाहरु निभाएँ पनि । भोलेन्टियर रिसर्च फाउण्डेशन नेपालको मेम्बर भएर काम गरेँ । अनगिन्ती सामाजिक कामहरु गरेको छु ।
टाइटल जित्नुभन्दा अघि र पछि आफूमा पाएको भिन्नता ?
पहिला म सपना रोका मात्र हुँदा यो काम गर्छु भन्दा मान्छेले विश्वास गर्दैन थिए । अहिले सहकार्य गर्नुहुन्छ ।
स्टेज कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुहुन्थ्यो, रेडियोमा केले तान्यो ?
म सधैँ नाम र प्रोफाइल चाहाने मान्छे । बच्चैदेखि कमसेकम चारजना मान्छेको अगाडि आफ्नो कुरा राख्न सकौं र अन्यायविरुद्ध बोल्न सकौं भन्ने लाग्थ्यो । काठमाडौ आएपछि संघर्षको दिनहरु सुरु भए । त्यत्तिनैबेला मिस मंगोल बनें । मिस मंगोल टाइटल जितिसकेपछि म मिडियामा रहन चाहान्थेँ, स्टेज कार्यक्रमहरुमा मलाई कार्यक्रम होस्ट गर्न बोलाइन्थ्यो पछि पेशागत रुपमै बदलियो । पछि रेडियोमा लोकदोहोरीमा नलेज भएको मान्छेको भ्याकेन्सी थियो र म गएँ ।
विवाह गर्नुभयो कि छैन ?
भाग्यले लेखेको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्न थालेको छ । अहिलेसम्म भएको छैन ।
अहिलेको सामाजिक संजाललाई कसरी लिनुभएको छ ? त्यसले महिलालाई कस्तो असर पारेको छ ?
सामाजिक संजालले मानव–मानवबिचको दुरी नजिक बनाउदै आत्मियता कायम गर्न राम्रो भुमिका खेलेको छ । म आफै पनि सामाजिक संजाल प्रयोग गर्छु । यसका सकारात्मक र नकरात्मक दुवै पक्ष छन् । म सकरात्मक लिनुपर्छ नकरात्मक वास्ता गर्दिन । सामाजिक संजालबाट ठगि, हत्या हिंसा जस्ता कार्य हुने हुँदा सबैजना सचेत हुनुपर्छ । महिला दिदीबहिनिहरु यो बिषयमा संयम हुन एकदम जरुरी छ । फेक आइडि बनाएर महिला दिदीबहिनिलाइ ठग्ने, झुटो प्रेममा फसाएर लुटपाट गर्ने जस्ता गतिबिधि यो समाजमा भइरहेका छन् भने महिलाहरुको प्राइभेसी अनावश्यक भाइरल बनाइ हिट हुन खोज्नेहरुका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर महिलामा परेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ३६ सय ३७ जनामा कोरोना पुष्टि
गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई कोराना संक्रमण पुष्टि
बागमती प्रदेश सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने